Nagro Teknụzụ: Ụzọ dị irè maka inweta na ichekwa owuwe ihe ubi - akwụkwọ akụkọ "Sistemụ nduku"
Ị chọrọ itolite nduku dị mma, nweta ma debe oke owuwe ihe ubi? Nye osisi nri dị mgbagwoju anya n'akụkụ niile nke uto ma jiri usoro nchebe wuru nke ọma.
Too akwụkwọ nri dị mma
Osisi ahụ na-enweta 75-80% nke nri ya sitere na ala. N'otu oge ahụ, nnweta nri maka ya na-adabere kpọmkwem na ọrụ nke microorganisms na ala, ma n'oge mmalite nke ịgha mkpụrụ, ala okpomọkụ na-adịkarị ala maka ha.
Mgbe ị na-eto akwụkwọ nri, ọtụtụ ndị ọrụ ugbo na-eji fatịlaịza ịnweta ịnweta granular akọrọ, ịdị nro na nnweta ya dịgasị site na 17 ruo 45%. Ma osisi nwere ike ghara iji ha ma ọlị. Fatịlaịza kpọrọ nkụ chọrọ mmiri iji rụọ ọrụ.
Humus na-enye gị ohere idobe mmiri ma mepụta nri ka mma. Ma, dị ka anyị maara, n'ọtụtụ mpaghara Russia, a na-ahụta mmebi nke ala dị egwu: ọdịnaya humus na-ada, ala na-adaba n'iyi na ihu igwe ikpeazụ. N'ọnọdụ nke ụkọ mmiri ozuzo na ụkọ mmiri, osisi ahụ anaghị enweta nri ọ chọrọ n'ụzọ ziri ezi, nke na-emetụta olu na àgwà nke ihe ọkụkụ na-adịghị mma.
Gịnị kpatara nri mmiri mmiri ji dị mma karịa nri akọrọ?
Ịtụgharị fatịlaịza akọrọ ka ọ bụrụ fatịlaịza mmiri mmiri na-enye nnukwu uru. Ọnụ ọgụgụ nke absorption nke fatịlaịza sitere na ụdị mmiri dị mfe ma dị mma maka osisi ahụ bụ 80%.
Ihe oriri na-edozi ahụ nke ịnweta phosphorus-potassium na-enye ihe ọkụkụ ahụ ohere ịmepụta usoro mgbọrọgwụ dị mma. Ọ bụrụ na, ọbụlagodi n'oge ịgha mkpụrụ, a na-ewebata ngwakọta nri nke nitrogen, phosphorus na potassium, osisi ahụ ga-enweta nri kwesịrị ekwesị ozugbo na-enweghị ntinye nke microorganisms, nke ga-enye ya mmalite nke ahịhịa ma mepụta ọnọdụ maka ya. mmepe kwesịrị ekwesị.
Mgbe emechara usoro mgbọrọgwụ na ọkwa mbụ nke ahịhịa, ọ dị mkpa ka a “rie ihe ọkụkụ dị mma” - ọ chọrọ fatịlaịza nitrogen. Ma iji too ezigbo ihe ubi, nke a ezughị. Isi ihe mgbochi na mmepe nke ihe ọkụkụ nwere ike ịbụ ihe na-akpata ụkọ potassium ma ọ bụ phosphorus na ala. Ọ dị mkpa ịmepụta ọnọdụ nke nri ịnweta ịnweta ga-arụ ọrụ n'usoro, n'usoro ziri ezi, n'ụdị kwesịrị ekwesị, n'ụzọ ziri ezi na mgbe niile n'ụdị kwesịrị ekwesị maka ihe ọkụkụ.
Ọtụtụ mgbe, ugbo na-ekwe ka ele anya na nri nitrogen. N'ihi ya, oriri mmiri nke osisi ahụ na-abawanye: a na-amanye ya ịgbanye mmiri mmiri site n'onwe ya iji nweta ihe ndị na-efu efu ma mee ka nitrogen dị. Nri na-adịghị mma ma ọ bụ ezughị ezu na microelements na-eduga na mmepe osisi na-adịghị mma. Skewness na-emetụtakwa nchekwa nke ihe ọkụkụ na ụlọ ahịa ihe oriri: mgbe mgbe, akụkụ nke ngwaahịa ahụ na-efunahụ, a na-emepụta ebe na-eme nri maka ọdịdị nke ebu na ire ere.
Otu ụlọ ọrụ NAGRO na-enye teknụzụ ohuru nke nri ihe ọkụkụ dị mgbagwoju anya nke mmiri, nke na-abawanye arụmọrụ ngwa fatịlaịza site na ugboro abụọ ruo anọ. Ojiji nke teknụzụ na-enye gị ohere ịkọ ihe ọkụkụ na nsonaazụ kacha mma na atụmatụ atụmatụ. NAGRO Group of Companies ewepụtala ọtụtụ usoro nri:
Otu 1 - mmalite lineups. Ha na-emepụta ntọala maka owuwe ihe ubi n'ọdịnihu.
Otu 2 - nri nitrogen bụ isi. Ngwakọta ahụ na-agụnyekwa phosphorus, potassium, sọlfọ, zinc, magnesium na nri ndị ọzọ.
Otu 3 - nri foliar. Mgbe nri gasịrị, onye ọrụ ugbo nwere ike iduzi mmepe nke osisi ahụ n'ụzọ ziri ezi.
Nkà na ụzụ NAGRO na-egosi nri dị mgbagwoju anya nke osisi, yabụ anyị na-atụ aro ka etinye fatịlaịza ọ bụghị naanị n'oge ịgha mkpụrụ, kama na-eburu n'uche usoro mmepe osisi. Enwere ike ijikọ ngwa ahụ ọbụlagodi na ọgwụgwọ fungicidal na ụmụ ahụhụ.
Nchedo zuru oke
Ọ bụrụ na e mepụtara ọkọnọ nri maka ihe ọkụkụ, ọ nwere ike iji ya dịka ọ dị mkpa, dịka ndị mmadụ na-eji friji na nri.
Ma nke a ezughị iji nweta ihe ubi, ọ dị mkpa iji chebe ihe ọkụkụ site na ahịhịa, ọrịa na pests. Ekwesịrị ịme ọgwụgwọ HSZR dịka oge ngwụcha na iwu akwadoro siri dị. Ma ọ na-esiri ike iwepụ mmetụta nke "ihe mmadụ na-akpata", dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, ọ bụ naanị mmejọ nke ndị ọrụ na-eme na nkwadebe nke ngwakọta tank nke agrochemicals na-eduga na mbelata nke mkpụrụ ugbo site na 15-20%. Ịkwụbiga ụgwọ ọgwụ ọjọọ na-eduga na mgbochi nke osisi ahụ, na-egbu oge uto na mmepe ya. Ntinye uche zuru oke na-ebelata nchebe.
Iji dozie nsogbu a, NAGRO Group of Companies ewepụtala ngalaba ọgwụ pụrụ iche. Ihe niile dị mkpa bụ ịkwanye uzommeputa ngwakọta ziri ezi n'ime usoro ahụ ma jikọọ arịa na CPP na ntinye. A na-edozi ihe ngwọta na-arụ ọrụ ozugbo n'oge a na-ejuputa tank ma ọ bụ sprayer: A na-etinye CPP nke ọma ozugbo n'ime ahịrị mmiri. Ka oge na-aga, usoro ahụ dum na-ewe ihe karịrị 5-7 nkeji.
Ojiji nke usoro dosing NAGRO na-enye onye ọrụ ugbo 100% ntụkwasị obi na ngwakọta nke ngwakọta tank, na-ewepụ ohere nke njehie.
Usoro na-enye ohere maka mgbanwe nke ihe mejupụtara. Dị ka ihe atụ, tụlee otu ugbo na-akọ otu ihe ubi n'ubi ndị dịpụrụ iche n'ebe ibe ha nọ. Were ya na pests dị iche iche na-emetụta ubi abụọ ahụ, na iji chebe ha pụọ ​​​​na ha, ọ dị mkpa ka a na-emeso ebe ahụ ihe ngwọta nke otu ihe ahụ, ma n'ụzọ dị iche iche.
Usoro ihe omume ahụ ga-adị mfe ịnagide ọrụ ahụ, na-ewepu ọnọdụ na nkezi mejupụtara, nke ga-eme ka mmezu nke mmetụta a chọrọ ma nyere aka belata oriri nke components. Ọnụ ego dị oke egwu ma a bịa na narị hectare.
Ejikọtara sistemu a na ngwanrọ Cropio, Agrosignal na 1C ERP maka ụlọ ọrụ ugbo. Ọ ga-ekwe omume ịwụnye usoro ndekọ ego na usoro nnyefe data na akụrụngwa ugbo ka o wee kwado ihe ndị Rosselkhoznadzor chọrọ na njikwa nke agrochemicals, nke ga-eme ka ndị ọkachamara na-emepụta akụkọ na-emepụta akụkọ na ọkara akpaka.
Ya na ndị mmekọ, NAGRO Group of Companies na-emeziwanye akụrụngwa mgbe niile maka mmepụta nke nri organo-mineral mmiri, na-emepụta ntụziaka na ịmepụta ihe ngwọta teknụzụ ọhụrụ.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, a na-eme ule ụlọ ọrụ na nnukwu na obere ugbo (Volga-Select na Bio-Agro (Tatarstan), ụlọ ọrụ nke Rusagro Group of Companies, United Confectioners, wdg), na-anakọta ahụmahụ ọrụ. A na-ere ihe karịrị igwe 300 maka nkwadebe nke ngwakọta ihe oriri na-edozi ahụ na ngwọta nke ngwaahịa nchebe osisi, taa ngwá ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na ugbo nke Russian Federation na mba ndị agbata obi.
Nhọrọ nke akụrụngwa na-ewere ọnọdụ na usoro mkparịta ụka. Anyị na-adịghị nnọọ ere, anyị na-enye ọhụrụ nkà na ụzụ iji na-ekwe ka otu ugbo nweta kacha na ntakiri ego.
Ihe mgbagwoju anya nke akụrụngwa nke NAGRO Group of Companies na-enye onye na-ahụ maka agronomist ngwá ọrụ magburu onwe ya maka imetụta mkpụrụ, ihe ngosi dị mma nke ngwaahịa na ndụ ha. Anyị na-enye iji akụrụngwa ugbo dị adị nke ọma yana nsonaazụ ego ejirila n'aka.
Moscow, Ryazanovskoe okporo ụzọ, 16 B
Maka ajụjụ niile, biko kpọtụrụ +7 977 730 19 23, Alexander Batrak
Tags: GK NAGROdosing osisiSistemụ NAGRO
Owuwe ihe ubi 2014: Potbọchị Ọkụ Nduku Samara Mpaghara
Mịnịstrị nke Ọrụ Ugbo ga-agbatị ikike nke ika "Perm Potato"